बरुण धवनले तापसी पन्नुलाई लात्ति हानेर घाइते बनाए ! (भिडियो) - Medianp
बरुण धवनले तापसी पन्नुलाई लात्ति हानेर घाइते बनाए ! (भिडियो)
मिडिया एनपी २प्रकाशित मिति: मङ्गलबार, भदौ २७, २०७४१३:१२0
काठमाडौं, २७ भदो । बरुण धवन आफ्नो बहुप्रतिक्षित चलचित्र ‘जुडुवा २’ हिट बनाउन कडा मेहनत गरिरहेका छन् । यो फिल्म १९९७ मा आएको सलमान खानको कमेडी फिल्म ‘जुडुवा’को रिमेक हो । अहिलेसम्म यो फिल्मका केही पोस्टर, ट्रेलर र गीत पनि रिलिज भइसकेका छन् ।
बरुणका साथमा फिल्ममा देखिने हिरोइन ज्याकिलन फर्नान्डिस र तापसु पन्नु पनि फिल्मको प्रमोशनमा जुटेका छन् । फिल्म सुटिङका बेला फिल्मको गीत ‘चलती है क्या ९ से १२’ सुटिङ भइरहेको थियो । जसको खुलसा तापसीले गरेको इन्स्टाग्राममा शेयर गरेको भिडियो मार्फत भएको हो ।
यो गीतमा बरुण, ज्याकलिन र तापसी एक साथ नाचिरहेका थिए । नाचिरहेका बेल बरुणको किक तपासीलाई लाग्यो । किक लागेपछि तापसी चिच्याइन् । यो भिडियो तापसी आफैले शेयर गरेकी छन् । फिल्म अगस्टमा रिलिज हुनेछ । एजेन्सी
काठमाडौंमा भोलि जितिया महोत्सव हुने